တနေ့ တခြား လူကြီးဖြစ်တာ မြန်လွန်းတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာမို့လူကြီးလေး မဖြစ်ချင်ပါနဲ့ အုံး သားလေးရယ် လို့ ပြောလို့ မရတော့ဘူး တန်ခူးရေ...အချိန်က စကားပြောလာတာပါပဲ... သူတို့ ကြီးပြင်းလာကြတဲ့ အချိန်မှာ သူတို့ တွေနဲ့ထပ်တူ နားလည်နိုင်ဖို့ ... သူတို့ တွေနဲ့မတူညီတဲ့ အယူအဆလေးတွေကို ပြေပြေလည်လည်
ညှိနှိုင်းလို့ ရဖို့ ကိုပဲ ကြိုးစားကြရတော့မယ် ထင်ပါရဲ့ ...
*** ဟိုတနေ့ က မောင် နဲ့တွေ့ တယ်.. ဟဲဟဲ..
နေလို့ ဘေးနားက အစ်မက ဘာတွေပြုံးနေတာလဲတဲ့ ဟဟား သားသားလူကြီးလေးက တယ်ချစ်စရာကောင်းလာပါလား ဘယ်တစ်ယောက်လဲမသိ ။ ဘောင်ဘီရှည် အနက် ၊ တရုတ်အင်္ကျီအနီလေးနဲ့ အပေါ်က အပြာနုလက်ရှည်လေးနဲ့ တစ်ယောက်လား မှန်းကြည့်တာ အစ်မ ပြောပြနော့် သေချာတွေ့ဖူးချင်လို့ :)
အမတန်ခူးက မိခင်ဆိုတော့ ပိုချစ်မှာပေါ့။ စာဖတ်ရသူတောင် လူကြီးလုပ်ချင်နေတဲ့ ကလေးလေးကို မှန်းချစ်နေတာ။ ဒီအရွယ်လေးတွေက ချစ်စရာအကောင်းဆုံး။ လူကြီးမလုပ်ချင်နဲ့ ကလေးလေးရေ။ အပူအပင်ကင်းကင်း နေဦး။ ကစားဦးနော်။
ီဒီက လူကြီးက ကလေးပြန်ဖြစ်ချင်.....။
သားလေးဆွဲတဲ့ မနုသီဟပုံတွေ ပြပါဦး.. မတန်ခူး....။
I love the stories about your son. They're beautify to read and remind me of my cousins when they were younger.
မတန်ခူးရေ..သားသားက အင်္ကျီအပြာအနွေးထည်လေး ၀တ်ထားတဲ့ကလေးလား.. အရွယ်တူ ချစ်စရာလေးတွေနော်.. :)
အမရေ..သူ့အသက်အရွယ်အရ ပြောင်းလဲလာတာကြောင့်ဖြစ်မှာပါ.. အရမ်းအတတ်မလွန်ရင် ပြီးတာပါပဲ အမရယ်.. အတတ်လွန်တဲ့ကလေးတွေကို အိမ်နားမှာ မြင်ဖူးနေလို့.. မိဘတွေ အသင်မတတ်တာလည်း ပါမယ်တူပါရဲ့.. ကလေးက ဆဲရင် ၀မ်းသာပြီး တလွဲချစ်တဲ့မိဘနဲ့ ကလေးတွေကိုလည်း မြင်ဖူးတယ်...
ကလေးတွေက သူ့ဗီဇလေးနဲ့ သူ မတူကြတတ်ကြဘူး တန်ခူးရဲ့။ တချို့ကျတော့လည်း ငြိမ်နေလို့ မရသလို တချို့ကျတော့လည်း စာအုပ်လေးတွေနဲ့မှ ပျော်တာ။ ကလေးတွေ အတွေးတွေက သိပ်ရိုးသားဖြူစင်တယ်နော်..
သားလေးကတော့ လူကြီးလေးဖြစ်ချင်နေပြီလား။ သူလေးလည်း လူရာဝင်ချင်လာပြီပေါ့လေ..။ တန်ခူးသာ နောက်ဘေဘီလေး သားလေးအတွက် ထပ်ယူလိုက်ရင် သူ ဆရာကြီး လုပ်တော့မယ်ထင်တယ်..။
သားလေးအကြောင်းတွေ ဖတ်သွား မှတ်သွားတယ်။
ဖတ်ရတာ စိတ်ကြည်နူးစရာ ဗျာ၊၊
ကြည်နှူးချင်သလား ကိုရီပက်ဘလစ်... ဟိ
လေသံကြည့်ရတာ သားလေးအတွက် ဆရာလုပ်ဖို့ဆိုပြီး အကြောင်းပြ နေတယ်။း)
သားလေးက ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ။ သူတို့လေးတွေက စွဲမိစွဲရာ နော်။ Ben 10 လိမ်မာနေပါစေလို့ ဆုတောင်းရမလိုလို။
မတန်ခူးတို့ မိသားစုဘ၀လေးက ပျော်စရာပဲ၊ အားကျမိတယ်။ ဒီလို အရွယ်လေးတွေက ချစ်စရာ အကောင်းဆုံးပဲ။
ချိုသင်းလဲ ကိုယ်သိပ်ချစ်ရတဲ့ တူ၊ တူမလေးတွေ ဒီလို အရွယ်မှာ ကိုယ် သူတို့နားမှာ မရှိဘဲ အဝေး ရောက်နေရလို့ နှမြောလိုက်တာ။ သူတို့လေးတွေရဲ့ အသေးစိတ် တိုးတက်မှုလေးတွေကို တသက်လုံး မှတ်ထား၊ သိမ်းထားပြီး သူတို့လေးတွေ ကြီးလာရင် ပြန်ပြောပြချင်တာ။ ကြည်နူးချင်တာ။
ငယ်ငယ်က လူကြီးတွေ ကလေးဖြစ်ချင်လိုက်တာလို့ ပြောရင် ပိုတယ်လို့ ထင်တာ... မျက်စိရှေ့မှာ ကလေးတွေ လူကြီး ဖြစ်ကုန်တာ တွေ့ပြီး စိတ်ထဲ တမျိုးပဲ ခံစားရတယ်။ ကိုယ်လည်း တချိန်က ကလေးပဲလေ ဆိုပြီး စိတ်ဖြေရတယ်။
သားလေးရေ.. လူလုပ်ဖို့အများကြီးမှာ အသက်ကြီးတော့မှ သားငယ် ဘဝရဲ့ လွပ်လပ်ခွင့်တွေ ပြန်လိုချင်မှာ အခုကလေးလုပ်ပါဦးသားငယ်ရေ
ကျောင်းမှာ လူကြီးလုပ်ချင်လုပ်ပေါ့ သားလေးရ
အိမ်မှာ မိဘရင်ခွင်ထဲမှာ ကလေးတဝလုပ်ပါဦး
အန်တီတို့ငယ်ငယ်က မိဘရင်ခွင်ထဲမှာ နေချင်တာတောင် ကံကြမ္မာက မပေးဝင်လို့ မိဘရဲ့ရင်ငွေ့ အမေတယောက်ရဲ့ ရင်ငွေ့ဆိုတာ ၆ နှစ်အရွယ်ထဲက အန်တီ့အနေနဲ့ မခံစားခဲ့ရဘူး သားလေးရဲ့။
သားလေးက အများကြီးငယ်ပါသေးတယ်သားလေးရေ ဖေဖေမေမေ ရင်ခွင်ထဲ ကလေးလုပ်ပါဦးသားငယ်ရဲ့
သားရဲ့ ပရိတ်သတ် နောက်တစ်ယောက် လာဖတ်သွားပါတယ်။ ငယ်တုန်းက လူကြီး ဖြစ်ချင်တယ်။ ကြီးလာတော့ ကလေးပြန်ဖြစ်ချင်တယ်။ ဒီလိုပါပဲလေ။
ဒီပို့စ်ကိုဖတ်မိပြီး မေမေ့ကိုသတိရတယ် ။
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ မြန်မြန်ကြီးချင်တယ် ။
၁၀ တန်းမအောင်ခင်ကလည်း ၁၀ တန်းမြန်မြန်အောင်ချင်တာ ၁ ပိုင်းကိုသေနေတာပဲ ။
အခုတော့ ပြန်မငယနိုင်ရင်တောင် ၊ လက်ရှိအသက်အရွယ်ကထက် ထက်မကြီးချင်တော့ဘူး ။းP
tra& &Sif;&Sif;vJ Ben10 odwf Nudkufwm.../ &Sif;&Sif;uawmY Pretend aqmYwmeYJ yg0gawG xkwfoHk;awmYwmbJ...olYyg0gu Winx Club qDu&qdkbJ../ olu Winx Club &JY oli,fcsif;rdkY yg0gawG&aewmwJU..rm;rm;yg0gvdkcsif&if usifYzdkY tips udkolu ay;tkef;r,fqdkbJ..::)))
ကလေးရေ။ လူကြီးမဖြစ်ချင်နဲ့ နော်။ လူကြီးဖြစ်တာကောင်းဘူး။ ဦးတော့ ကလေးပဲ ဖြစ်ချင်တယ်။ :D
အဟီး.. ညီငယ်လေးက စကားတတ်ပြီး သိပ်စပ်စုပုံရတယ်.. ကလေးဆိုတာဒီလိုပါပဲ အဲ့လိုစူးစမ်းလေ တတ်သိနားလည်လေ..
အင်း.. မိခင်ဆိုတော့ တွေးပြီးစိတ်ပူမှာပါပဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်၊ စကားတော့မများကြပါနဲ့း)
ဟိဟိ ညီငယ်လေးက ချစ်ဖို့ကောင်းမှာပဲ။
အဟီး.. ဟုတ်သည်ရှိ၊ မဟုတ်သည်ရှိ စိတ်ချမ်းသာအောင် သားကိုပြောသွားပေးလို့
သတိတရမုန့်လာကျွေးတာ၊ ကြိုက်မယ်ထင်ပါတယ်.. လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ပဲ သွားစားလိုက်နော်အန်တီ
မတွေ့တာကြာပြီ။ အမ tag ထားတာကို ရေးပြီးပေမယ့် လာမအော်မိဘူး။
ဒါနဲ့ စကားမစပ် အမရေ
ဒီဇင်ဘာ ၆ရက် မနက် silk air လေယာဉ်နဲ့များ
လေယာဉ်ပေါ်မှာ တွေ့လိုက်သလိုပဲ။ :D
တန်ခူးသားကို ဒီနေ့တွေ့ခဲ့တယ်။ သူ့အဖေနဲ့ ပိုတူလာတယ်။ လက်မှာပတ်ထားတာကြီးကို လက်ညိုးထိုးပြပြီး “ဒါ..ဘာကြီးလဲ၊ သား” လို့ မေးတော့ “ယက်ပတ်” လို့ ဖြေတယ်။း-)
တားလို့ တော့ရမှာ မဟုတ်ဘူး...
ဒီမှာလဲ နော်နော် တစ်ယောက်နဲ့ကျနော်လဲ ....။
သူကတော့ ကြီးလာရင် spiderman လုပ်ပြီး
ဘဲ ပြောပြီး ၀ယ်ပေးလိုက်ရတဲ့ ...ကစားစရာတွေ..။
ဟုတ်ပါတယ် သက်ဝေရေ… ဒီခေတ်ကြီးက လူဖြစ်မြန်ကြတယ်နော်… မောင်က ပြန်ပြောပါတယ်… သက်ဝေနဲ့ တွေ့ ခဲ့တယ်တဲ့…
မောင်မျိုးရေ… ဘယ်လိုလုပ်မှန်းသလဲ… တော်လို့ ပါ…
ဟုတ်တယ်နိနိရေ… လူကြီးဘ၀ရဲ့ အပူတွေ မသိသေးတော့လဲ လူကြီးလုပ်ချင်ကြတာ ဖြစ်မှာပေါ့…
Sin dan lar ရေ… ဟုတ်ပါ့ညီမရေ… လူ့ အလို နတ်မလိုက်နိုင်ဆိုတာ ဒါမျိူးထင်ပါရဲ့…သားလေးဆွဲတဲ့ပုံလေးကို တင်ပေးမယ်နော်…
ကျေးဇူးပါ Zatliteရေ… ခုလိုလာလည်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…နောင်လဲလာလည်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်…
နုရေ… အင်း… မောင်မျိုးကို မေးသလိုပဲမေးတော့မယ်… ဘယ်လိုလုပ်မှန်းလဲ… ဟုတ်တယ်… အမမောင်ဝမ်းကွဲလေးဆို အတတ်လွန်နေလို့မနဲထိန်းရတယ်… သားကတော့ နှေးတဲ့အထဲပါတယ်…
မ ရေ… သားလေးအတွက် အဖော်လေးမွေးချင်သော်လည်း… မ တို့ ကို အားကျမိတယ်…
ပန်ရေ… ဖတ်ထားမှတ်ထားနော်… ဒီမှာ တူလေးဖြစ်ဖြစ် တူမလေးဖြစ်ဖြစ် ချီချင်လှပြီ… ဘယ်တော့လဲ…
မမရေ… ကိုRepublicကို ကြည်နူးရအောင် နည်းလမ်းလေးပေးမလို့ လား…
ကေရေ… ကေပြောတာ သဘောမပေါက်ဘူး… ဘာလဲဟင်…
ချိူသင်းရေ… ဟုတ်တယ်…ben 10က လူဆိုးတွေနဲ့ ဖိုက်ရင် အဲဒါလူဆိုးတွေမို့ ဖိုက်တာ… လူကောင်းတွေဆို ben 10က သိပ်ချစ်တာလို့ ပြောရတယ်… တော်ကြာ သတ်ချင်ပုတ်ချင်စိတ်တွေ ၀င်လာမှာ ကြောက်လို့ … ချိူသင်းရေ… ချစ်စရာလေးတွေ ရွေးရေးထားတာကို… ပင်ပန်းတာလဲ အရမ်းပဲညီမရေ…
ဟုတ်တယ်မီယာရေ… အိမ်ပြန်သွားလို့ကလေးလေးတွေ ကြီးကုန်တာတွေ့ ရင် စိတ်ထဲတမျိုးပဲ…
မြတ်နိုးရေ… မြတ်နိုးရေးတာလေး ဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းဘူး… မြတ်နိုးအဖေရဲ့ ရင်ငွေ့ က နှစ်ဆနွေးထွေးပါတယ်ညီမရေ… take care(ဟုတ်ကဲ့… တီတီမြတ်နိုးရေ… သားသား ကရေးလုပ်ဦးမယ်နော်… တီတီစကားကို နားထောင်ပါ့မယ်… )
သားပရိသတ်တွေကို သားကလဲ အရမ်းချစ်… ဟုတ်ပါ့ပုံရိပ်ရေ… ငယ်ငယ်က တဘက်ကြီးကို ဆံပင်လုပ် အမေ့ထမီကြီးမနိုင်မနင်း ၀တ်ခဲ့ပုံ ပြန်မြင်မိတယ်…
မီးတောင်ရေ… အဲဒီလို ရပ်တန့် ထားလို့ ရရင် တက္ကသိုလ်နေ့ ရက်လေးတွေကို ရပ်တန့် ထားချင်တယ်… ပျော်ပြီးရင်းပျော်နေရတဲ့ဘ၀တွေလေ… ခုလို လာလည်တာ ကျေးဇူးပါ…နောင်လဲလာလည်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်…
ဌေးရေ… ရှင်းရှင်းလေးကလဲ ben 10 ကြိုက်လား… အမက ယောင်္ကျားလေးတွေပဲ ကြိုက်တာထင်လို့ …
ဦးဦးကောင်း… ကရေးဖြစ်ချင်ရင် သားနဲ့ လာဆော့… ကဗျာတွေ ချည်းရေးမနေနဲ့ …
တူတော်မောင် cratonရေ… ဟုတ်လို့ ပြောတာပါ… ကောင်မလေးတွေက အဲဒီလို မပြောကြဘူးလား… ကျွေးတဲ့မုန့် တွေ အကုန်စားလိုက်ပြီ…
ကိုတောင်ငူရေ… ဘလော့ဂ်နားမယ်ဆိုလို့စိတ်မကောင်းဘူး… Dec6ဆို ကိုတောင်ငူ လူမှားတာ ဖြစ်လိမ့်မယ်… ကျွန်မက လကုန်ခါနီးမှ ပြန်တာ… နောက်ဆို ထင်နေရင် မတန်ခူးလို့လှမ်းခေါ်ကြည့်လိုက်လေ… အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ…
အဖေနဲ့ ပိုတူလာတယ်လားကိုပေါရေ… ရန်ကုန်ပြန်တုန်းက လူတွေက ကျွန်မနဲ့ ပိုတူလာတယ်ဆိုလို့ပျော်နေတာ…
ဟိဟိ… နော်နော်က spiderman လား… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မိဘကိုလုပ်ကျွေးမယ်ဆိုတဲ့ အသိလေးကပဲ ချစ်စရာ….